Dhalinta da’da yar ee Gaalkacyo oo la soo gaarsiiyay agab ciyaareed – Radio Daljir
Maarso 15, 2013 3:58 b 0
Gaalkacyo, March 15- Akadeemiyada wiish ayaa dhalinta da’doodu ay ka yartahay 15-sano jir waxaa ay ugu deeqday agab ciyaareed kaasoo ay qayb ka wada yihiin kooxda walaalaha hormarinta Sportska dhalinta da’da yar ee magaalada Manchester ee Britain ee loo yaqaan WPSC oo hormuud uu ka yahay Fu’aad Cismaan iyo garsoore ka tirsan FIFA Xasan Aaden Yabarow Wiish.
Qalabkan Sports ayaa isugu jira kubado iyo funaanado, kuwaasoo wax badan ka tari doono qabashada tartamo kubadda cagtaa oo ay helaan da’ yarta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwo waqooyiga iyo koonfurta Gaalkacyo.
Isku xiraha masuuliyiinta qalabkan soo dhiibay iyo dhalinta C/qani Khaliif Carabeey ayaa qalabkaasi ka dib markuu ka guddoomay waxaa uu oga mahad celiyay daneeyaasha ciyaaraha gaar ahaan kuwa Soomaalida akadeemiyada Wiish iyo WPSC, wuxuuna sheegay inuu sida ay tahay oga faa’iidayn doono dhalinta tartamana uu ugu qaban doono.
Qalabkan ciyaaraha kubadda cagta ee dhalinta Gaalkacyo la soo gaarsiiyay ayaa ka danbaysay ka did markii bishii hore Gaalkacyo uu soo gaaray Fu’aad Cismaan oo ah madaxa WPSC, kaasoo ay si diirran dhalinta da’da yar ay u soo dhaweeyeen taasoo dhalisay in qalabkan dhalinta ay si degdeg ah u helaan.
Fu’aad ayaa dhalinta u ballan qaaday inuu Gaalkacyo ka furi doono akadeemiyad lagu soo saaro dhalinta danaynaysa xirfadda kubadda cagta si loogu hormariyo.
Garsoore Xasan Yabarow Wiish ayaa isaguna dhankiisa ka ballan qaaday inuu qayb lixaad leh uu ka qaadan doono hormarinta iyo caawimaadda dhalinta jecel xirfadda kubadda cagta si looga badbaadiyo dhaqamada aan ku haboonayn loona helo dhalin ka dhisan maskax ahaan iyo jir ahaan.
Ma ahan markii ugu horaysay oo dhalinta Gaalkacyo la soo gaarsiiyo agab Sports, waxaana arintaasi ay dhalisay inay dhalinyarada da’doodu ka hoosayso 15-sano jirka ay sameeyaan is dhex gal iyo xiriir joogtaa.
Dhalinta qalabkan la soo gaarsiiyay oo qaarkood hadlay ayaa si weyn ugu riyaaqay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee Soo dhaweeyay.
” Fu’aad iyo? Wiish waanu idin xusi doono, mar walba ma garab taagnaada qalabkiina waa na soo gaaray”, Ayuu yiri mid ka mida dhalinta da’da yar.
Ugu danbayn C/qani Khaliif ayaa tilmaamay inuu sii ballaarin doono barnaamijyada noocaan oo kalaa, wuxuuna qurba joogta ugu baaqay inay gacan iyo taageeraba ka gaystaan hormarinta iyo dhisidda maskaxda jiilka soo koraya.
Ganacsiga magaalada Garoowe oo sii koraya & Suuqyo cusub oo la sameeyey (Sawiro)